Maxaa sababay Internet la'aanta Muqdisho iyo qeybo ka mid ah Soomaaliya? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaxaa sababay Internet la’aanta Muqdisho iyo qeybo ka mid ah Soomaaliya?
Maxaa sababay Internet la’aanta Muqdisho iyo qeybo ka mid ah Soomaaliya?
Jigjiga (JO) – Qeybo ka mid ah Soomaaliya ayaa internet la’aan ah maalintii labaad. Inta badan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya dadka ku sugan ayuu ka maqan yahay adeeggan aasaasiga u ah dhallinyaro badan.
Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ka mid ah kuwa ka hawgala gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay in “baaritaan hordhac ah ay ku hayso cilladda ku timid”.
“ka dib markii dabaylo xoogbadan ay ka dheceen badwaynta Hindiya, waxay saameyn ku yeesheen xarigii Internet-ka, taas oo sababtay inay cilad ku timaado”, ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay bogga shirkadda Hormuud.
Sidoo kale adeegyada kale ee internet-ka, ee aan ahayn midka Hormuud, oo dad badan ay isticmaalayeen ayaa ka maqan magaalooyiin ay Muqdisho ka mid tahay.
Waxat Netblock sheegtay in saameynta ugu weyn ee internet la’aanta ay gaartay magaalada Muqdisho. “Internet-ka la jaray ayaa weli sii socda niyadoo xadideysa tabinta dhacdooyiinka wararka”, ayaa lagu qoray boggeeda oo looga hadlo arrimaha internetka la jaro ee caalamka.
Ma jiro wax warka ah oo weli ka soo baxay dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo ka saabsan arrintan.
Haseyeeshee shabakadda Netblock ee la socota dhaqdhaqaaqa intarnet-ka ayaa cilladaas la xiriirisay “dhacdadii baarlamaanka ee Sabtidii” ee la sheegay in xilka looga qaadaty Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
“Ma jirto wax muujinaya in xarig caalami ah oo badda hoosteeda mara uusan shaqeyneyn oo saameeyay Soomaaliya,” ayaa lagu qoray farriin Twitter ah oo shirkaddaas ay baahisay.
Update: As real-time network data show the internet blackout affecting #Mogadishu and much of #Somalia continues, the European Union's @EU_EEAS has joined the US Embassy @US2Somalia condemning PM Khayre's removal as unconstitutional and irregular.
? https://t.co/Dqtp0RFJu1 pic.twitter.com/qCysWrl0xf
Waxaa Netblock arrintan ku tilmaameysaa mid “la jaray” in ay tahay, waxayna la xiriirineysaa xaaladihii siyaasadda ee ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka dhacay.
“Internetka la jaray ayaa weli ka taagan Soomaaliya iyadoo baarlamaanka uu u codeeyay in meesha laga saaro Ra’iisul Wasaare Khayre”, ayaa lagu qoray bogga shirkadda, 26-kii bishan June.
Saameyntii ka dhalatay internet la’aanta Muqdisho
Internet la’aanta qeybo ka mid ah Soomaaliya waxay saameyn xoogan ku yeelatay adeegyada xafiisyada, shirkadaha, bangiyada, xawiladaha iyo xarumo badan oo hawlahooda shaqo ay ku tiirsaneyd adeegsiga internet-ka.
Weriyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Beela Sheegow ayaa ku soo warranatay in adeegyada intarnet-ka ee wali go’an ay yihiin kuwa taleefoonnada gacanta laga isticmaalo iyo kan xarig la’aanta.
Arrintan dhaqaalaha ayey si wayn u saameeysay, maadaama bangiyada, shirkadaha diyaaradaha ay ku shaqeeyaan khadka internet-ka.
“Internet la’aanta waxay jahwareer ku keentay habkii loo jari jiray tikidhada; tusaale ahaan halkii dadka ay tikidhada ka jaran jireen online-ka, hadda waxay ku qasbanaadeen in ay yimaadaan xafiiska, si loogu jaro tikidhka, sababtoo ah, habkii diiwaangelinta macaamiisha wuxuu ku shaqeyn jiray internet-ka”, ayuu yiri Cabdullaahi Yaxya oo ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee ka hawgala magalada Muqdisho.
Waxaa kale oo intaa uu ku daray in shaqaalihii joogay garoonka ay ku adkaatay xaqiijinta magacyada dadka safraya, taasina ay keentay in farriin loogu diro magacyada, halka markii hore ay kala bixi jireen hannaanka diiwaangelinta ee internet-ka.
Wicitaanka dhanka internet-ka ee dibadda oo aad uga qiima jaban kan taleefonka caadiga ah ayaa sidoo kale adkaatay, inkastoo taleefoonnada caadiga ah ee la iska wici karo dal iyo dibadba, dadkuna ay isu diri karaan lacagaha taleefoonnada la isaga diro.
Waxaana saacadihii lasoo dhaafay adkeyd in sidoo kale war laga helo koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo maalmahanba ay ka taagnyed xiisad siyaasaded.
Dhibataada dhanka internet-ka ayaa dhacday maalin ka dib markii gollaha shacabka uu sheegay in ay kalsoonida kala noqdeen xukuumadii uu hogaaminayay ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre.
Shirkadaha internet-ka ee Soomaaliya waa kuwo gaar loo leeyahay, waxaana badankooda maamulo shirkadaha isgaarsiinta.
Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Xil Ka Qaadista Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Iyo Go’aanka Uu Qaatay